QOLKA PRIMULA, XEERARKA DARYEELKA GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Qolka Primula ayaa muddo dheer ku guuleystay qiirada dadka jecel dhirta gudaha. Waxay ka duwan tahay qarsoodi la'aanta marka la tago, quruxda iyo hooska ubaxa. Kaligiis, koronto dhererkeedu wuxuu gaarayaa 25 sentimitir.
Nidaamka xididku waa mid xoqan, caleemaha rosette, qiyaastii 7 cm dhexroor. Primrose Blooms laba jeer sannadkii - guga iyo jiilaalka.
Waxay labadaba yihiin lab iyo dheddig labadaba. Hal sano-jir asaasiga ah ayaa ku haboon in lagu koro xaaladaha deegaanka.
Hoyga waxaa ugu wanaagsan in la koro obkoniku ama shiineyska Shiinaha.
Ma taqaanaa? Primula waxay ku jirtaa qoysaska of primroses, kuwaas oo ay ka mid yihiin in ka badan 1000 dhirta. Dabeecadda, caleemaha ayaa kora dhulgariirka, inta badan Europe, Shiinaha, Waqooyiga Ameerika iyo wadamada Aasiya.
Noocyada ugu muhiimsan ee asaasiga gudaha
Qolalka qadada ayaa ka duwan xannaanada xannaanada. Beertu waxay u adkaysatay hargabka marka loo eego gudaha gudaha.
Si looga jawaabo su'aasha ah: "Miyuu suurtogal ah in la abuuro qol cad oo ku yaal waddada?" - waxaad u baahan tahay inaad fahamto noocyada iyo noocyada asaasiga ah. Ka dib oo dhan, waxaa jira noocyada hybrid in la beeray labadaba beerta iyo windowsill.
Guryaha jilicsan - Tani waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee dhirta. Duufaanku waxay ka kooban yihiin 10-20 ubax, caleemuhu waa cagaar iftiin oo midabkiisu u eg yahay, korna u ah height 30 cm. Noocyo jilicsan jilicsan:
Mars - Meelaha casaanka ah;
Haluusa cad - ubaxyo cad oo leh luuliyo lakab;
Juliet isku qasan - midab midab leh oo midabkiisu ka soo baxo midabada midabada ah. Waa mid aad u caan ah ubaxyo badan;
Abuuritaanka - boomaato buluug ah oo buluug ah;
Boqoradda barafka - ubaxyo cad.
Dib-u-soo noqnoqon waxaa iska leh qoyska reer Shiinaha. Ciriiri ku yaalla qiyaasta weyn ee ubaxa. Warshadkan dilka ah wuxuu gaari karaa dherer 20 cm, mar kasta oo la xannaaneeyo daryeel fiican.
Cuncunka caanka ah ee gadaashiisa qashinka ah - Twilly ii taabto. Ubaxyo leh guduud, guduud, midab leh.
Waa muhiim!Waxaa la ogyahay in noocyada qaar ka mid ah si sax ah loo yaqaan 'conical estrose' oo keena xasaasiyad.
Astaan ​​la'aan Primrose waa aragti dhexdhexaad ah. Qodobkani wuxuu kori karaa beerta iyo guriga oo ku yaal windowsill. Noocyadaasi waxay kala baxaan laga bilaabo Abriil ilaa Luuliyo waxayna leeyihiin noocyo badan. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa:
Sphinx Apricot - ubax leh midab casaan dhalaalaya, taas oo u muuqda guduudasho;
Sphinx F1 neon Rose - midabka casaanka ah ee ubaxa;
Qalabka quruxda leh ee Roma - ubax lilac leh xuduud dahab ah.
Marka lagu daro noocyada kor ku xusan, badanaa waxaa laga helaa Shiinaha Shiinaha (caddaan, casaan, ubaxyo casaan ah iyo geesaha la isku qurxiyo) iyo Kyuish ciriiri (oo leh ubaxyo yaryar oo jaale ah).
Xaaladaha lagu hayo qolka qashinka
Si aad ahaato xayawaanku ma ahan mid xanuunsan oo ubaxsan, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida loo daryeelo cayayaanka guriga. Noocyada daryeelka ee cayayaanka waa sida soo socota: Doorasho karti leh meel loogu talagalay warshad, waraabinta saxda ah, iftiinka iyo heerkulka, bacarimiso iyo waraabinta. Haddii wax walba si sax ah loo sameeyo, macmacaanku wuxuu kuugu mahadcelinayaa ubaxyo qurxoon oo qurxin kara gurigaaga.
Primula waxay jeceshahay diirimaad iyo cadceeda. Laakiin raajadu ma aha inay toos u noqdaan, maadaama ay waxyeellaynayaan caleemaha cirridka.
Waxaa ugu wanaagsan in dhirta loo dhigo armaajo gaar ah ama daaqadaha daaqada dhinaca galbeed ama dhinaca bari. Kadibna qorraxdu way iftiimaysaa qiiqa, laakiin tiro xadidan.
Xaaladaha heerkulka loogu talagalay cayayaanka waa in lagu taageeraa sida soo socota:
Dayrta-dayrta - laga bilaabo +18 ilaa + 20 ° S;
Jiilaalka - min +16 ilaa + 18 ° S;
Inta lagu jiro ubax - laga bilaabo +16 ilaa + 20 ° S.
Haddii aad aragto xaaladaha heerkulka saxda ah iyo nalalka saxda ah, caleenta ayaa kor udhaca waqti dheer iyo ka badan.
Haddii aad ka fekertay sababta caleemo qoyan oo caleemo huruud ah, waa inaad u fiirsataa nalalka saboolka ah ama hawada kulul ee meesha dhirta ay tahay.
Substrate for primrose waa la iibsan karaa horay loogu diyaariyey qoyska Primrose, waadna kari kartaa naftaada. Si loo diyaariyo dhulka loogu talagalay, waa lagama maarmaan in la adkeeyo heerka: dhulka caleen, ciid, peat - 1: 1: 1.
U hubso inaad ka taxaddariso dheecaan, sidaas darteed xididdada geedka ma aha qudhun.
Primula waxaa lagu quudin karaa xalal macdan oo daciif ah oo leh maadooyin. Tani waxaa ugu fiican ee la sameeyo inta lagu jiro ubax, bacarimiso labadii toddobaadba mar.
Haddii aad ku darto bacrimin ka hor ubax, ka dibna caleemaha ayaa kori doona. Inta lagu jiro xilliga nasashada waxa fiican in aanad ku quudin xayawaanka, maadaama uusan u baahnayn wax badan.
Lovers of qolka qashinka qolalka badanaaba waxay la yaabaan: "Sidee loo nadiifiyaa qolka macaamiisha?" Inta lagu jiro ubax, dhirta u baahan tahay waraabinta badan.
Hubi in dhulka uusan qalajin wax badan, laakiin uma baahnid inaad ku shubtid midkood, maaddaama ay xididadu bilaabi karaan inay qudhuntaan.
Biyaha waa inay noqdaan mid jilicsan iyo heerkulka qolka. Isla markiiba ha ku shubin biyaha tuubada, ha u istaagin.
Waa muhiim! U hubso in biyuhu aanay ku dhicin caleemaha qiiqa inta lagu jiro waraabinta. Tani waxay sababi kartaa inay kala jajabaan.
Wixii koritaanka iyo kicinta of primula ubax u baahan tahay in dib u soo celinta. Si sidan loo sameeyo, raac farsamada sida loo bedelo qaliinka. Dhirta yaryar waxaa la geliyaa hal mar sannadkii, dadka waaweyn - mar ama labadii sanaba mar.
Wixii transplanting habboon waxaad u baahan tahay:
Si sax ah u qaado dheriga. Awoodda cusub waa in ay ka ballaaran tahay tan hore.
Xayawaanka iyo dheecaanku waa in loo soocaa si gaar ah loogu talagalay caarada.
Marka dib loo dhoofiyo waa in ay ahaato dusha sare.
Baahida dhuleed waa la bedelayaa.
Marka transplanting, ka taxaddar inaadan ku dhaawacin nidaamka xididka jilicsan. Qaybta koollada waxaa la gooyaa dayrta, dhammaadka bisha Sebtembar. Inta u dhaxeysa beerista, ciidda agagaarka geedka waxay u baahan tahay in la cusbooneysiiyo waqti ka waqti.
Haddii aad rabto in aad baabuur ku soo baxdo, waxaa haboon in la isticmaalo geedo ah qiyaastii laba sano jir.
Waa in lagu dhex beeray dheriyo ama weel gaar ah oo ay la socdaan qoryaha dhulka. Ubaxku waa inuu ku jiraa qol qabow, tusaale ahaan, in lagu koriyo. Cadaadiska waa in la sameeyaa ka hor inta aan la qaboojin.
Daryeelka asaasiga ah waa mid sahlan. Raac nidaamka heerkulka (+ 5 ... + 8 ° S), ma aha lagama maarmaan in la waraabiyo dhirta. Bishii Febraayo, dhirta waa in loo wareejiyaa meelo iftiin leh heerkul ah + 8 ° C Laga bilaabo hadda, billow waraabinta asaasiga. Dhirta leh daryeel ku haboon ayaa ku duuli doona badhtamaha bisha Febraayo.
Ma taqaanaa? Bannaanka xayawaanku waxay badanaa sameeyaan qashin-qubka khasaarinta March 8. Fasaxa gu'ga, qoyan caleemaha maanta, oo ay la socdaan tulips caan ah iyo mimosas, waxaa la siiyaa dumarka.
Nafaqada guriga laga helo
Cuncunka hore wuxuu ku dhacaa labo siyaabood: adoo qaybinaya baadiyaha ama abuurka. Hababka koowaad iyo kan labaad labadaba ma ahan kuwo adag oo aaney gaarin waqti badan.
Si aad u hesho miraha, caleenta sifaha ah waa mid si qaas ah loo sameynaayo. Abuurtaan miraha xilliga kuleylka ee weelka qotoda dheer, laakiin weelasha waaweyn ama weelasha. Ka dib markii miraha la beeray, waxay u baahan yihiin inay daboolaan filim ama dhalo.
Si ay u noqoto mid kor u kaca, waa in ay bixisaa nidaamka heerkulka lagama maarmaanka ah - tani waa + 16 ... + 17 ° C. Iyadoo beeritaanka haboon, geedo waxay noqon doontaa 2 toddobaad.
Kala saarid by qaybta baadiyaha dhacdaa inta lagu guda jiro tallaalka. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida loo fuulo qolka hoose.
Laga soo bilaabo dhirta dadka qaangaarka ah waxaa kala soocaya by cusub, dhalinyarada da'da iyo lagu beeray dheriyo gooni ah. Si uu dhirtu u dego si ka wanaagsan, u beddel dhulka oo ay hore u koray.
Qodobbada waxtarka leh ee macdanta guriga
Guryaha gurigu waa mid kala duwan oo faa'iido leh. Primula waxaa loo isticmaalaa daawada cudurada kala duwan. Waxaa loo yaqaanaa maadada sare ee ascorbic acid, carotenoids, iyo glycosides phenolic.
Caleemaha geedka waxaa ku jira sapomin. Waxaa loo isticmaalaa xoojinta nidaamka difaaca jirka, la dagaallanka kolestaroolka, ilaalinta beerka. Caleenta ilkaha ayaa loo isticmaalaa sidii kaydka saliidaha lagama maarmaanka ah..
Ubax qallalan ayaa loo isticmaalaa tinctures iyo shaallada madax xanuun, beriberi iyo qabow.
Inkasta oo dhirta asaasiga ah iyo dhirta adag, laakiin, sida dadka kale, waxay jiri karaan jiran waxayna ku jiri karaan cayayaanka. Cudurrada asaasiga ah ee caadiga ah ayaa badanaa la saameeyaa.
Dhuxul macaan - dhibco huruud ah iyo ubax cadaan ah ayaa ka muuqda caleemaha. Cudurku wuxuu ku kobcin karaa xaaladaha qoyaan badan iyo heerkulka dhexdhexaadka ah. Si loola dagaallamo cudurka Waa lagama maarmaan in lagu daweeyo caleemaha la isku daro Bordeaux ama Oxychloride copper. Haddii dhirta si xun u waxyeelo, waa in laga saaraa.
Gray kallana - wuxuu saameeyaa caleemaha iyo ubaxa. Ubaxa wuxuu noqonayaa ubaxu wuxuu bilaabaa inuu kareemo. Horumaraya qoyaan badan iyo xaddi badan oo nitrogen ah ee ciidda. Si loo baabi'iyo cudurka u baahan tahay inaad ku buufiso dhirta leh oxychloride copper. Ka saar dhirta saameeya.
Ramulariosis waxaa lagu muujiyey dhibco huruud ah caleemaha, qaybta hoose ee caleemaha waa lakab cad. Dhirta ay saameysay waxay u baahan tahay in lagu buufiyo oxychloride copper ama daroogooyinka kale ee bakteeriyada leh.
Si loola dagaalamo iyadoo la socdo wadooyin iyo calaamado fiiri dhirta ilma-galeenka inta badan joogitaankooda. Dhaawac yar Ku daawee dhirta saabuun (guriga) ama saliidda macdanta. Iyadoo guuldarro xoogan leh Isticmaal Phyto-Beer, Akarin, Fufanon Iskra-M, iwm.
Sidaa darteed, haddii aad ogaato in caan beeluhu bilaabay inuu u ekaado mid aan caadi ahayn ama uusan ubaxin, fiiro gaar ah u lahow daryeelka.
Si aad u ogaato waxa la samaynayo haddii calaamadaha cilladu soo baxaan, waxaad u baahan tahay inaad fahamto cilladaha suurtagalka ah marka la wareysanayo ama xaaladaha heerkulka ee ku habboon dhirta.
Hayso socodka qoyaanka qolka oo ha iloobin bacriminta inta lagu jiro ubax. Haddii aad raacdo shuruucda daryeelka ilkaha, waxay si fiican u barbar istaagi doontaa iyo waqti dheer.